अमिताभ-रेखाको लभस्टोरी जानेपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ – प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Uncategorized/अमिताभ-रेखाको लभस्टोरी जानेपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ – प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन !
बलिउड मा जब जब माया पिरतीका कथाहरु भनिन्छन् तब यी दुइको नाम सबैको दिमागमा आउछ । यो नाम हो अमिताभ र रेखा जुन जोड़ी रील लाइफ तथा रीयल दुईवटै मा सुपरहिट रह्यो ।भ्यालेन्टाइनस् डे को अवसरमा जान्नुहोस त्यो बलिउडको लभस्टोरी को बारेमा जस्को सार्बजनिक रुपमै ठुलै चर्चा भएको थियो ।
उनीहरुको माया जुन कहिल्यै मिलन भएन तर यो माया को बारेमा सबै तिर हल्ला थियो । यो यस्तो पिरतीको कथा हो जस्को जादुको बयान बितेका ति पलहरुले पनि गर्न सक्दैनन् ।बलिउडमा जब जब माया पिरतीका कथाहरु भनिन्छन् तब यी दुइको नाम सबैको दिमागमा आउछ । यो नाम हो अमिताभ र रेखा जुन जोड़ी रील लाइफ तथा रीयल दुईवटै मा सुपरहिट रह्यो ।